रुकुम घटनामा ठूलो समूहले आक्रमणपछि निर्मम हत्या गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष - Jhapa Online
भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए
मधेसी समाजमा आत्महत्याको घटना बढ्दै
नेपालको संक्रमण दर भारतभन्दा दोब्बर
दल दर्ता गर्न संघीय संरचना अनिवार्य
कोरोना परीक्षणः बढी शुल्क लिए लाइसेन्स नै खारेज हुने सरकारी उर्दी, मनपरी शुल्क असुल्दै निजी अस्पताल
नेपालमा माघसम्म २ करोड ५० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन
रुकुम घटनामा ठूलो समूहले आक्रमणपछि निर्मम हत्या गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
काठमाडौँ, ३१ असार । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा जेठ १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका नवराज विकसहितका व्यक्तिलाई ठूलो समूहले निर्मम आक्रमणपछि हत्या गरेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित संसदीय छानबिन समितिले मङ्गलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एक महिनाको अवधिमा स्थलगत अध्ययनपछि समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन मङ्गलबार बुझाएका हुन्।
समितिले घटना अन्तरजातीय सम्बन्धका कारण उत्पन्न भएको र दोहोरो झडप नभई एकपक्षीय रूपमा घटना गराइएको निष्कर्ष निकालेको छ । “हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । मुख्यतः घटना दोहोरो झडप हैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्मम रूपमा आक्रमणपछि हत्या भएको छ । अन्तरजातीय सम्बन्धको कारणबाट घटना विकसित भएको समितिको निष्कर्ष छ’’, संयोजक पौडेलले भने ।
ठूलो समूह मिलेर आक्रमण गरी नवराजसहित छ जनाको हत्या भएको निष्कर्ष समितिको छ । घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिँदै समितिले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले पीडित परिवारलाई राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ । आश्रित परिवारका बालबच्चालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सुझाव दिँदै समितिले आश्रित परिवारलाई कम्तीमा १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन र मृतकका नाममा स्मृति पार्क बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
जेठ १० गते चौरजहारीमा भएको घटनामा नवराज विकसहित छ जनाको हत्या भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ३४ जनाविरुद्ध रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अदालतले २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
यो पनि पढ्ने कि
राजनीति • समाज
समाज • स्वास्थ्य
शर्मा झापा अनलाइनका सम्पादक हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सहित विभिन्न सञ्चार संस्थामा काम गरेको अनुभव छ ।
कर्मचारीले घुस खाँदा कार्यालय प्रमुखमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा
ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘संसदीय दलमा तपाईंहरूको चार–पाँचजना बढी होलान्, तिनलाई म तानिहाल्छु’
झापाको लोकप्रिय अनलाइन न्युज पोर्टल हो, झापा अनलाइन डटकम । यसको कार्यालय बिर्तामोडमा छ ।
झापामा एक करोडको लागतमा सिटी पार्टी प्यालेस
झापामा बिहान ८ देखि २ बजेसम्म व्यवसाय गर्न पाइने : बालबालिका, गर्भवतिलाई हिँड्डुलमा निषेध
झापा क्षेत्र नं. २ का प्रदेश सभा सदस्य कार्कीले भने, ‘रेलमार्गमा परेका जनतालाई चलन चल्तीको मूल्य दिनुपर्छ’
Copyright © 2020. Created by Gaurav.